SOAS, University of London - Kudzidza muEngland, United Kingdom
Acronym : SOAS
inotangwa : 1916
Musakanganwa kuti kurukura SOAS, University of London
Kunyoresa pana SOAS, University of London
SOAS, University of London ndiye chete yepamusoro kupfungwa muEurope kushandisa pakudzidza Asia, Africa uye Pedyo uye Middle East.
SOAS ndiye chevanorwara kunoshamisa. Kwzvo tichienzanisa mutauro bhezari, chirango unyanzvi uye remunharaunda pfungwa, ine kupfuura wevasungwa muEurope emushandi hanya Africa, Asia neMiddle East.
Kune rimwe divi, izvi zvinoreva kuti SOAS nyanzvi mutsimba zvenzara nyaya – utongi hwegutsaruzhinji, budiriro, kodzero dzevanhu, kuzivikanzwa zvauri, pamutemo hurongwa, urombo, chitendero, zvemagariro – kunangana-zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu panguva imwe nguva yasara anochengetedza unyanzvi ruzivo mumitauro uye nguva uye nzvimbo kwete kuwanikwa kumwe muUK.
Izvi zvinoita SOAS kwakafanana wobvunzisisa uzivi uye kubudirira. Zviri pasi pose zvedzidzo pechingoro uye inokosha zvokushandisa London. Tiri kurarama munyika ine todzokera miganhu uye kwoupfumi uye kwesayenzi simultaneity. Asi asiwo nyika umo musiyano uye regionalism pachavo kupa acutely. Inyika kuti SOAS ari Unongova akaiswa kuongorora, kunzwisisa uye tsanangura.
yedzidzo yedu simbisa mitauro, tsika uye nzanga yose Africa, Asia neMiddle East anotiita chinokosha muturikiri munyika yakaoma.
SOAS, University of London pagungano aitarire:
SOAS ari pamusoro National paavhareji kuti mudzidzi kugutsikana pa 89% (National mudzidzi tsvakurudzo 2013).
SOAS ane zvinopfuura 5,000 vadzidzi vaibva 133 Nyika iri kembasi, uye pfuurei 50% muzana vavo vanobva kunze kweUK. Pamusoro pe, pamusoro 3,600 vadzidzi munyika yose vari mumwe zvirongwa kudzidza kure kwedu.
Pane nehasha akaenzana paradzanisa pakati undergraduates (55%) uye postgraduates (45%).
24% pakati undergraduates dziri pamusoro 21 pavanotanga kosi yavo.
Kupfuurisa 350 Rokutenderwa dhigirii mubatanidzwa zvinowanikwa sayenzi evanhu, Arts, nevanhu uye mitauro, zvose ane nevamwe remunharaunda pfungwa uye pasi pose kuenderana. uye pamusoro 115 dhigirii zvirongwa.
SOAS inopa ane isingaenzaniswi siyana mumitauro dzisiri European, zvose izvo zvinogona kudzidzwa pasina risati ruzivo. The chikoro akanga paakavapa Mambokadzi wacho Anniversary Prize muna 2009 nokuti zvakaisvonaka, Kufara nokudzika yaro mutauro nedzidziso.
Vanopfuura makumi mana muzana dhigirii yedu mapurogiramu Rokutenderwa mukana kupedza gore kudzidza imwe nyika.
SOAS ane chikuru Kuwanda mazvikokota mudonzvo (300+ renyanzvi) hanya pakudzidza Africa, Asia neMiddle East chero yunivhesiti munyika.
Mune Research Assessment Shandisai pamusoro 2008, kupfuurisa 85 muzana submissions dzedu dzakanga yandaipuwa panguva kana-soro mugiredhi 4* (unhu nyika-kutungamirira), 3* (pose chakanakisisa) kana 2* (kuzivikanwa pose).
Small-boka kudzidzisa chinoramba chinokosha kudzidza pana SOAS - yedu mudzidzi-mudonzvo reshiyo (11.3:1) ndomumwe chakanakisisa muUK.
pamusoro 115 dhigirii Programmes
SOAS ane pamusoro 115 dhigirii zvirongwa akadzidzisa pamusoro kembasi uye zvakasiyana-siyana rworwendo, zvitupa uye zvitupa vanodzidziswa kure kudzidza, mune zvesayenzi evanhu, nevanhu uye mitauro, ane nevamwe remunharaunda pfungwa uye pasi pose kuenderana.
The SOAS Library - ichangobva vagadzirise - ane zvinopfuura 1.5 miriyoni zvinhu uye yakakura zvemagetsi pfuma nokuda pakudzidza Africa, Asia neMiddle East, uye kunokwezva nyanzvi kubva pasi rose.
Anthropology uye wemagariro evanhu
History of Art uye Archaeology
China uye Asia Inner
Finance uye Management
Japan uye Korea
Pedyo uye Middle East
Politics uye International Studies
The School of Oriental Studies rakaumbwa 1916 pa 2 Finsbury Circus, London, panguva iyoyo kwakavakirwa of London Institution. The chikoro akagamuchira youmambo ayo chata pamusoro 5 Chikumi 1916 uye akabvuma vadzidzi yaro yokutanga pamusoro 18 Ndira 1917. The chikoro akanga pamutemo aitsaurira mwedzi gare gare 23 Kukadzi 1917 naMambo George V. Pakati vaivapo vaiva Earl Curzon pamusoro Kedleston, formerlyViceroy of India, uye nezvimwe kabhineti machinda.
Yechikoro dzakavamba basa raiva mberi bhezari British, sainzi pakutengeserana muAfrica uye Asia uye kupa London University pamwe somukwikwidzi yakakurumbira Oriental zvikoro Berlin, Petrograd uye Paris. The chikoro pakarepo kwakava musimboti pakudzidzisa vakuru British, ichitongwa machinda vasori kwemakungwa Postings mhiri British Empire. Africa wakaradzikwa zita rechikoro muna 1938.
Nokuti nguva iri pakati pemakore 1930s, asati kutamira ayo ano nzvimbo pa Thornhaugh Street, Bloomsbury, chikoro yaiva Vandon House, rusvingo Street, London SW1, pamwe raibhurari riri pana Clarence House. Kutama wayo kwakavakirwa matsva Bloomsbury rakaitwa achikwira pokumbononotswa kuvaka uye chivakwa nehafu rapera akatora pakarova kwakasimba pairwiswa muna September 1940. Pakatanga Yechipiri World War, vazhinji University of London mumakoreji akabviswa kuLondon muna 1939 uye billeted pamusoro mumayunivhesiti ose pamusoro mumatunhu. The School aiva, pamusoro zano Hurumende wacho, kuchinjirwa kwaKristu College, Cambridge.
mu 1940, pazvakava pachena kuti kudzokera London zvaibvira, kuchikoro akadzokera kuguta uye rakanga dzichengeterwe kwemwedzi yakati mumakamuri gumi pana Broadway Court, 8 Broadway, London SW1. mu 1942, Hondo Office aibatana kuchikoro dhipatimendi Japanese kubatsira kuderedza yokushomeka mune Japanese nyanzvi dzemitauro. State dzidzo zvaipirwa kusarudza girama uye chikoro paruzhinji vakomana kurovedza sezvo Vashanduri muchiuto uye noungwaru navatariri. Vaigarapo pana Dulwich College south London, vadzidzi pakuzivikanwa akanyatsoti sezvo ari Dulwich vakomana.
Bletchley Park, dzimbahwe Hurumende Code uye cypher the School (GC&CS), akanga kunetseka anononoka amunofanira SOAS, saka vakatanga wavo Japanese-mutauro makosi pana Bedford muna February 1942. Mapoka vakanga rinotungamirirwa nemauto cryptographer, Col. John Tiltman, uye Retired Royal Navy mukuru, Capt. Oswald Tuck.
Achibvuma SOAS muchinangwa muhondo, ari 1946 Scarborough Commission (pamutemo mashoko “Commission pakati Enquiry kupinda Facilities nokuda Oriental, kwechiSlavonic, East European uye African Studies”) Mushumo yakarumbidza huru kuwedzera mbuva pakudzidza Asia uye chikoro akabatsirwa zvikuru haizopereri largesse. The SOAS School noMutemo yakatangwa 1947 pamwe Professor Vesey-Fitzgerald sezvo wayo musoro wokutanga. Kukura Zvisinei akanga rakaderedzwawo nokutevera makore upfumi austerity, uye pamusoro Sir Cyril Philips kuzvitutumadza ari directorship mu 1956, muchikoro yakanga anodzivirira ezvinhu. Pamusoro wake wemakore makumi maviri noutariri, Phillips tinoshandurirwa chikoro, vachisimudza mari uye achiwedzera tumira rechikoro.
A college wepaYunivhesiti London, minda School zvinosanganisira Mutemo, Social Sciences, Humanities uye Languages ​​uchinyanya panotaurwa Asia uye Africa. The SOAS Library, riri Philips Building ndiye UK National zvokushandisa zvinhu chokuita Asia uye Africa uye ari kupfuura ayo omutsa world.The chikoro rakura zvikuru mumakore matatu apfuura, kubva vashoma pane 1,000 Vadzidzi vari kwe ma1970 kuti kupfuura 6,000 vadzidzi nhasi, kusvika hafu yavo postgraduates. SOAS ari partnered pamwe National Institute of Oriental Languages ​​uye Marudzi (INALCO) muParis rinowanzova vaiona vakaenzana reFrance SOAS.
mu 2011, kuchimbudzi Council vanotenderwa kuchinja bumbiro yepachikoro kuubvumira mubayiro madhigirii nemumba zita rayo, Zvichitevera kuitika wakasiyiwa vamwe mumakoreji London School of Economics, University College London uye waMambo College London. vadzidzi vose itsva vakanyorwa kubva September 2013 achava ukodzere kuti SOAS, University of London mubayiro.
mu 2012 mutsva chinooneka nokuzivikanwa nokuti SOAS kwakatangwa kushandiswa kudhindwa, digitaalinen vezvenhau uye vakakomberedza pazvivako. The SOAS muti chiratidzo, kutanga rakatangwa muna 1989, akanga redrawn uye recoloured nendarama, pamwe chiratidzo itsva pakusanganisirawo mashizha emiti gumi, kusanganisira Chirungu Oak kumirira England; ari Bodhi, Coral Bark Maple, Teak rinomirira Asia; Mugomo Acacia, African Pear, Lasiodiscus kumiririra Africa; uye Date Palm, Mutamba uye Ghaf yokumiririra Middle East.
Unoda kurukura SOAS, University of London ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
SOAS, University of London musi Map
Photos: SOAS, University of London pamutemo Facebook
SOAS, University of London wongororo
Join kukurukura pamusoro SOAS, University of London.
University weExeter Exeter